Dhaqaale Archives - Boga Wise Man
Ugu horeyn Baarlamaanka Somaliland ayaa u ogolaaday maamulkii Siilaanyo inay wada hadalo toos ah la galaan dawlada Soomaaliya. Waxaan xasuustaa kulan dhex maray wefti Madaxweyne Siilaanyo hogaaminayay iyo jaaliyada reer Somaliland ee London. Waxa kulanka si kulul ula hadlay Madaxweynaha wiil dhalinyaro ah oon aan filayo inuu indho la’aa. Ninkaasi wuxuu ku eedeeyey Wasiirkii Arrimaha […]
Siyaasiga #Somaliland marna kuuma sheegayo waxyaabaha aan qoraalkan iyo kuwii ka horeeyey ee taxanaha ahaa inta badan kaga waramo. Horta siyaasada fiicani waa tan dadka iyo dalka illaalinteeda iyo horumarinteeda ka hadasha ee aan qof iyo qabiil ka hadal. Waa muhiim in dadka wax musuqa la dhaliilo laakiin waa in iyaga shakhsi ahaan la dhaliilo. […]
Asxaabigii weynaa, marna amiirul mu’miniin, marna tobankii janada loogu bishareeyey Cumar Binu Khadaab, radiyallaahu canhu, wuxuu ahaa mid kamida hogaamiyeyaasha maamul wanaaga dunida kuwa ugu fiicnaa ee soo mara adduunka. Markii uu Cumar ahaa amiirka mu’miniinta waxa jirta dhaqan cajiiba oo uu lahaa oo ahaa in uu magaalada dhex lugeeyo habeenkii iyo maalintiiba. Waxaana lagaa […]
Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybta Afraad
Markeliya ayaa Ethiopia qiiqday sanadkii 2018-kii, kadib markii mudaharaadyo badani ragaadiyeen muddo laba sano ka badan oo ay wadeen qoomiyada ugu tirada badan Ethiopia ee Oromada. 2-dii April ayaa waxa Ethiopia dooratay Raysal Wasaare Abiy Ahmed oo qoomiyad ahaan kasoo jeeda Oromada. Abiy Ahmed waxa da’diisu ahayd markii uu qabsaday Ethiopia 41 sano. Abiy waxa […]
Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybta Saddexaad
Siday ogyihiin akhristayaasha aanu isku xidhanahay illaa wakhtigii la aasaasay waxa Somaliland lagu hayay cunaqabatayn dhaqaale. Cunaqabatayntan ayaa ah mid ay iska kaashadeen wadamo badan oo kuwa Khaliijku ugu horeeyaan looguna talo galay in la curyaamiyo dhaqaalaha Somaliland. Dhanka kale walaalaheena Soomaaliya iyaga waxa ku adkaatay inay dhistaan nidaam dawladeed waxana lagu sii hayay dawladnimo […]
Qaybta Koobaad… Wuxuu soo toosay isagoo werwersan. Saacada ayuu eegay mise waa 3.37 PM. Wuxuu hurday laba saacadood. Isagoo dheelalawsan ayuu salaadii casar tukaday. Salaada markuu ka baxayba maskaxdiisii way kala degtay balse werwerkii kamuu bi’in. Waxay ahayd maalin muhiim u ah Mukhtaar. Waa maalintii uu go’aanka ka gaadhi lahaa saddexdii hablood ee uu la […]
Somaliland waxay maraysaa marxalad u baahan ka baarandegid iyo in la dejiyo istaraatijiyad cusub oo wadanka loo badbaadiyo. Maanta khatarta ugu badani Somaliland waxay kaga imanaysaa dalka dibadiisa. Waxaynu jaar lanahay Somalia oo loo qaybiyey shan gobol iyo dawlad dhexe. Oo inagoo arkaynaa shanti gobol ragii hogaaminayay ay wadamo ay ka mid yihiin Imaaraad, Turkey, […]
Hodan – Qaybaha Koobaad iyo Labaad
Hodan waxay is aragtay iyadoo soo jeeda. Sarriirteedii weynayd ee ay keligeed huruday ayay is rogtay laba jeer si ay u gaadho koomadiinka oo telefankeedu saarnaa. Waxay eegtay saacada mise waa 01.30 AM. Inkastoo ay berri tahay maalin Sabti ah oo aanay shaqo lahayn, todobaddii maalmood ee ugu dambeeyeyna ay aad u shaqaynaysay hadana hurdadii […]
Xusuus Qorkii Maxamed S Gees - Sanadihii Cadhada 14
Xikmadii Maamul Ee Cumar Binu Khadaab (Radiyallaahu Canhu) 6
Somaliland Dagaal Hoose Ayaa Kusocda 3
Qaab Dhismeedka Qasriga Cusub ee Somaliland 2
Cilmi iyo Calaf 2